1. 'Bitcoin', mari yedhijitari yenyika nyowani Imhandoi yemari inowana mari yakawanda! Kana makumi emakore apfuura Mumwe munhu anokuudza kuti kuchave nemari yakasununguka kune chero yehurumende agency. Asi ichave inozivikanwa mukushandisa kwese kwese Ndeipi ine mubhadharo wepasi wekubhadhara kupfuura uya wekubhadhara kubhengi Iwe waiseka uye ukatadza kutenda. Asi nhasi zvinoratidzwa kuti unogona kutenga chero chinhu. Izvo zvakare zvinopa mubayiro zvinoshamisa nemhando yemari inozivikanwa se 'Bitcoin'. Bitcoin Chii chinonzi Bitcoin? Bitcoin imari yedhijitari. Yakagadzirwa nemakomputa. Ndeipi mari isingabatike Iko hakuna chimiro chekuti isu tione sebhangi kana mari. Iyo isiri-yepakati system. Hakuna muridzi. Asi inogona kushandiswa pachinzvimbo chemari kutenga online nevezera-kune-vezera kubhadhara system. Ndokudaidza mari iyi "Cryptocurrency"
2. Kuti uve nemari, unofanirwa kuva nechikwama, ndiyo mari Kana iwe uchida kuve nemari, iwe unozofanirwa kutsvaga chikwama chakanaka, icho chichava nemabasa akafanana neayo bank account. Isu tinochengeta bitcoins tisati tazvishandisa. Kune akawanda akasiyana mapuratifomu echikwama - Coinbase chikwama chikwama chiri nyore kushandisa pachiratidziri che smartphone. Ichatsigira zvese iOS uye Androind ine bank account inosunga. Uyezve, basa rekutsinhana bitcoin rinobuda semari chaiyo uye rinopa inishuwarenzi yemari - Mycelium ndiyo inonyanya kufarirwa chikwama chikumbiro pamafoni efoni. Inogona kutsigira matekinoroji matsva senge Trezor, Tor uye Bitcoin yekuchengetera Hardware zvakare. - Electrum Chikwama ichi chirongwa chinoshandiswa pakombuta. Inouya neakanakisa kuchengetedzeka encryption system. Kuchengeta yakawanda yemabitcoins zvakanaka
3. Ungawana sei Bitcoin
4. Waya yemahara kune vanotanga Kwete yakasimba kwazvo muhupfumi, inokwanisa kuwana yemahara bitcoin kubva kune anovimbwa ekupa mawebhusaiti Izvo zvinofanirwa kuongororwa zvakanyatso Nekuti vazhinji vavo vanonyengedzana Iyo webhu iyo inogoverwa chaizvo yakaita se https://freebitco.in Izvo zvinogona kupinda mukati uye kunyorera uye kuwana yedu bitcoin kero kubva kune chero webhusaiti muZipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro kana Huobi.co.th yekuzadza nekuchengetedza iyo bitcoin nguva dzose awa imwe neimwe, ichisvika padiki mari. riinhi Unogona kuendesa kuchikwama chedu
5. Kutengesa mutsetse, kwatinozotenga bitcoin kubva kubhaht, tinozviita kuThailand, webhusaiti yavo, Zipmex.co.th, Bitkub.com, Satang.pro kana Huobi.co.th ichatibvumidza kunyorera kuziviswa, kuendesa baht Akaunti uye tenga bitcoin kubva kune mutengesi kuve vedu. Zvinoenderana nekuti unosarudza kubata mari kwemakore akati wandei, kana iwe unogona kutengesa Bitcoin nekutengesa mubhah futi, asi kunewo njodzi. Nekuti iyo crypto musika yakavhurika nguva dzese.
6. Iyo yakasarudzika uye inonakidza bit yeBitcoin ndeyekuti inogona kucherwa segoridhe mune fomu yedhijitari. Nekuti yakagadzirirwa kuti ive nemamiriyoni makumi maviri nerimwe, hakungavi nezvimwe. Saka tinofanira kushandisa michina yekuchera. Kuchera kumusoro nemidziyo yehardware Izvo ino excavator inogona kutengwa online Ingoimisa, chivhara mukati, ubhadhare bhiri yako uye uisiye. Icharamba ichichera mari yedhijitari kwatiri.
7. Nzira yega yega yekudyara muBitcoin yakasiyana. Unogona kusakwanisa kutonga kuti ndeupi akanakisa Asi zvakakosha kuti ugare uchidzidza ruzivo uye maitiro emari yemaviri. Kuti ubatsire kubvumirana purofiti nenzira kwayo kwenguva yakati rebei. Uye tora mhedzisiro yakanakira iwe